Alaab-qeybiyeyaasha qajaarka badda, warshadeeyayaasha Bolise
Inta badan laga bilaabo qoto dheer ee Badda Waqooyi, kaas oo ah qajaar badda duurjoogta ah. Qajaarkeeda badda iyo borotiinka ku jira ayaa aad uga sarreeya
qajaarka badda si macmal ah loo beero.
[Muuqaal] Budo jaale ah oo aan caddaan ahayn
[Waxyaabaha firfircoon] Holothurin/Polysaccharide
1. Jirka, qani ku ah arginine wuxuu kor u qaadi karaa dib-u-soo-nooleynta unugyada bini'aadamka iyo hagaajinta jidhka, waa alaabta ugu muhiimsan ee ceeriin ee isku-darka kolajka bini'aadamka.
2. Qajaarka badda waa cunsur cimri dheer, cunsur ka-hortagga gabowga, wuxuu dib u dhigi karaa gabowga
3. Waa shay muhiim u ah maqaarka si uu u ilaaliyo dabacsanaanta, waxayna saamayn fiican ku leedahay quruxda iyo daryeelka maqaarka
4. Waxay ka caawin kartaa carruurta inay hagaajiyaan difaaca, yareeyaan dhacdooyinka cudurrada. Waxay ka qayb qaadataa korriinka garaadka, korriinka jidhka, wanaajinta xusuusta iyo awoodda fikirka maskaxda.
1. Waxaa si weyn looga codsadaa goobta alaabta daryeelka caafimaadka;
2. Lagu dabaqay cuntada iyo cabitaanka;
3. Codsaday goobta qurxinta;
Ku saabsan Soosaarka Qajaarka Badda
Soosaarka qajaarka badda waa hanti nafaqo u leh jidhka bini'aadamka, waxa uu ka kooban yahay in ka badan 50 nooc oo nafaqeeyayaal ah, sida peptide, amino acids, vitamins, calcium iyo noocyo badan oo xubno raad raac ah.
Soosaarka qajaarka badda kaliya kuma koobna wax badan oo peptide ah oo muhiim u ah bini'aadamka, sidoo kale waxaa hodan ku ah asiidhyada amino, fiitamiinnada, calcium iyo noocyo badan oo xubno raad raac ah. Cilmi-baaris casri ah ayaa muujisay in peptide qajaarka badda uu yahay nafleyda firfircoon, waxay si weyn u hagaajin kartaa awoodda jidhka iyo ka hortagga daalka, anti-gabowga.
Soosaarka qajaarka badda waxaa loo adeegsadaa dawo dhaqameedka Shiinaha si loogu daweeyo dhibaatooyin caafimaad oo dhowr ah, oo ay ku jiraan daalka, awood la'aanta iyo xanuunka kala goysyada. Qajaarka badda ayaa ka kooban heerar sare oo ah chondroitin sulfate, qayb weyn oo ka mid ah carjawda. Soosaarka qajaarka badda ayaa laga yaabaa inuu kaa caawiyo yareynta xanuunka wadajirka ah waxaana sidoo kale ku jira xeryahooda dabiiciga ah ee ka hortagga bararka.